Culummo si Kulul uga Hadashay Afla-gaadeyntii Nebigeenna Muxamed NNKH |
Culummo si Kulul uga Hadashay Afla-gaadeyntii Nebigeenna Muxamed NNKH
Tadalis SX Soft no rx, acquire dapoxetine. Culummo Soomaaliyeed iyo kuwo caalami ah ayaa oo uu ka mid yahay guddoomiyaha hay’adda culumada Soomaaliyeed, Sh. Bashiir Axmed Salaad ayaa ka hadlay katoonno lagu afla-gaadeeyay Nebigeenna Muxamed (NNKH) oo ay warbaahinta reer galbeedku daabaceen gaar ahaan wargeyska dhawaan lagu weeraray magaalada Paris ee xarunta dalka Farasiinka.
Sheekh Bashiir ayaa kula taliyay muslimiinta caalamka kula taliyay inay wax walba oo lagu dhibaateynayo Nebigeenna iyo diinteenna Islaamka si weyn uga hortagaan, wuxuuna sheegay in kartoonnadan ay ahaayeen kuwo waqti fog ay gaaladu daabacaysay.
“Sababta gaaladu ay u afla-gaadeynayaan Nabigeenna Muxamad (NNKH) iyo ambiyada Alle waa fashil ku dhacay diinta gaaladu ay aaminsan yihiin, taas oo keentay in Islaamku ku faafo dalalka Yurub,” ayuu yiri Sheekh Bashiir.
Wuxuu kaloo Sheekhu intaas ku daray in faafista Islaamka ee Yurub ay aad uga caroodeen gaalada ayna tahay sababta ku kalliftay inay diinta Islaamka iyo ambiyada Alle u afla-gaadeeyaan.
“Yuhuudda ayaa u badan kuwa ambiyada Alle afla-gaadada u geysta, waana dad adduun iyo aakhiraba aan waxba ku lahayn… marka muslimiinta waxaan kula talinayaa inay difaacdaan diintooda,” ayuu Sheekh Bashiir hadalkiisa ku daray.
Sidoo kale, culummo badan oo muslimiin ah ayaa ka hadlay arrintan, iyagoo ku tilmaamay inay tahay fool-xumo weyn oo aan la ogolaan karin, iyagoo ku baaqay inay laga hortago wax walba oo Islaamka lagu dhibaateynayo.
“Dadka hadda wax ka sheegaya Nebigeenna NNKH waxay ka mid yihiin kuwii horay wax uga qori jiray ambiyada Alle. Waxaana marag-ma-doonto ah inay nimankan ay qaarkood yihiin Yuhuudda,” ayuu mar kale yiri guddoomiyaha hay’adda culummada Soomaaliyeed, Sheekh Bashiir Axmed Salaad.
Ugu dambeyn, Sheekhu wuxuu sheegay inay muslimiinta laga doonayo inay isku-duubni weyn muujiyaan si ay uga hortagaan falalka lagu afla-gaadada Nebigeenna NNKH iyo ambiyada kale ee Alle, isagoo xusay in haddii muslimiintu ay kala fikirka ay haatan ku jiraan kusii jiraan in la afla-gaadeyn doono diintooda iyo nabiyada Alle.
Si kastaba ha haatee, wuxuu guddoomiyaha hay’adda culummada Soomaaliyeed intaas ku daray in dalka Farasiiska uu yahay kan ugu badan dalalka Yurub ee ay shacabkiisu diinta Islaamka qaadanayaan, ayna sii socon doonaan dadka hanuunaya.